တောင်ဥက္ကလာပနှင့် မြောက်ဒဂုံ ဆက်သွယ်သည့် ငမိုးရိပ်တံတားဖွင့်၊ ဗားကရာနှင့် ကြည့်မြင်တိုင် တ - Yangon Media Group
တောင်ဥက္ကလာပနှင့် မြောက်ဒဂုံ ဆက်သွယ်သည့် ငမိုးရိပ်တံတားဖွင့်၊ ဗားကရာနှင့် ကြည့်မြင်တိုင် တ
တောင်ဥက္ကလာပနှင့် မြောက်ဒဂုံ ဆက်သွယ်သည့် ငမိုးရိပ်ချောင်းကူးတံတားကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဗားကရာနှင့် ကြည့်မြင်တိုင်တစ်ဖက်ကမ်းကို တံတားထိုးရန်လည်း စီစဉ်နေကြောင်းသိရသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်က တောင်ဥက္ကလာပနှင့် မြောက်ဒဂုံတို့ကိုဆက်သွယ်ပေးထားသော ငမိုးရိပ်တံတား(သစ္စာ) ဖွင့်ပွဲ၌ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ကြည့်မြင်တိုင် တစ်ဖက်ကမ်းရှိ ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းအတွက် သွားလာရေးလွယ်ကူ စေရန် ဗားကရာနှင့် ကြည့်မြင်တိုင်တစ်ဖက်ကမ်းသို့ တံတားထိုးရန်လည်း စီစဉ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ဒီငမိုးရိပ်ချောင်းရိုးကို ပြန်ပြီးတော့ အဆင့်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ စီစဉ် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုဟာ မြစ်ရိုးနဲ့ ကားလမ်းနဲ့ ရထားလမ်းနဲ့ ဆုံစည်းရာနေရာတွေကို ဖွံ့ဖြိုး အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီနဲ့ ကျွန်တော်တို့ လေ့လာဆန်းစစ်မှုတစ်ခုကို ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ ရန်ကုန်မြို့ပတ် Water Bus များပြေးဆွဲရာတွင်လည်း ရန်ကုန် တစ်မြို့လုံးကို ခြုံငုံမိစေရန် ငမိုးရိပ် ချောင်းရိုးတစ်လျှောက်ကိုလည်း ပြေး ဆွဲမည်ဖြစ်ရာ ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ယာဉ်လမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့မှုများတွက် ရေကြောင်းမှ သွားလာခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်လက် ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့အား ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ် အဆောက်အအုံများ ဖြင့် စိမ်းလန်းပြီးနေချင်စဖွယ်ဖြစ် အောင် နိုင်ငံတကာအကူအညီများ ဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောသည်။ ”ရန်ကုန်မြို့ကို ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်တွေနဲ့ စိမ်းလန်းပြီး နေချင်စဖွယ်စီးပွားရေးမြို့တော်ကြီးဖြစ် အောင် ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ သစ်အနေနဲ့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် နေပါတယ်။ ဒီဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကိုလည်း နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း တွေဖြစ်တဲ့ DICA တို့၊ KOICA တို့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ အကူတွေ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ အကူအညီတွေ၊ အီတလီနိုင်ငံရဲ့ အကူအညီတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးကို ပိုမိုဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် အစိုးရအဖွဲ့သစ်အနေနဲ့ ဆက်လက်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ လက်ရှိဖွင့်လှစ်လိုက်သည့် ငမိုးရိပ်တံတား(သစ္စာ)သည် ငမိုးရိပ်ချောင်းပေါ်တွင် ဖွင့်လှစ်သည့် ၁၈ စင်းမြောက်တံတားဖြစ်သည်။ အဆိုပါတံတားကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏လမ်း ညွှန်မှု၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ၏ ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲမှုတို့ဖြင့် MMA ENEI-NEERING CONSUL-TAN- T’L.,LTD မှတာဝန်ယူကြီးကြပ်ပြီး မြတ်နိုးသူဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းတံတားသည် ကျပ်သန်း ၅ဝဝဝ ကျော်အကုန်ခံကာ ဆောက်လုပ်ထားသည့် မြစ်ကူးတံတားတစ် စင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ငမိုးရိပ်ချောင်းတွင် ယင်းတံတားအပါအဝင် စုစုပေါင်း ၁၈ စင်းရှိကြောင်း ရန်ကုန်မြို့၏ဆက်သွယ်ရေးလွယ်ကူစေရန် ယင်းတံတားသည် တောင်ဥက္ကလာနှင့် ဒဂုံဘက်အခြမ်းကို ဆက်သွယ်ထား သည့် တံတားဖြစ်ကြောင်း၊ ငမိုးရိပ် ချောင်းကူး၊ ပါရမီမြစ်ကူးတံတားသည်လည်း အသွားအလာအလွန်ကျပ်တည်းနေသည့် တံတားဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်ကားပေါင်း ၂ဝဝဝဝ ကျော် ဖြတ်သန်းနေကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ယခုအခါ ပါရမီတံတားနှင့်အတူ သစ္စာလမ်းတံတားကိုထပ်ပြီး တည် ဆောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ကျပ်တည်း နေသည့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ပြ ဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည့် အပြင် ဒဂုံမြို့သစ်ဘက်ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်လာမှုအရှိန်အဟုန်လည်း မြင့်တက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းတံတား ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝန် ကြီးများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဦးမောင်မောင်စိုးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌတို့က ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မရှင်နှင့် နာဂ အမျိုးသား ဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီ ဆွေးနွေး
ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီ ခြောက်ဦးကို တရားမဝင် ခေါ်ဆောင်လာသည့် ကြေးမုံသတင်းထောက် ပန်းတောင်းမြို့နယ်တ?
ဘုတလင်တွင် ၁၂ ဘီးကားဖြင့် ပိတောက်သစ်တုံး ၅ဝဝ ကျော် စွန့်ပစ်ထားခဲ့မှုအား အမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ရ??
‘ထာဝရအမေ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို နိုင်ငံကြီး ငါးနိုင်ငံတွင် သွားရောက်ပြသရန် စီစဉ်ထား
အောက်မေ့ဖွယ်ရာ အတိတ်တစ်ခါ (လမ်းမတော် တန်ဆောင်တိုင် လွမ်းချင်း)
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များအနက် အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကို လူကြိုက် အများဆုံးဖြစ်